Myanmar Security Forum - MSF - Rules , Announcements and News
Myanmar Security Forum - MSF MSF Forums Official Information Rules , Announcements and News
၁. ဖိုရမ်မှာ post မတင်ခင် စည်းကမ်းချက်များကို အရင်ဖတ်ပါ
၂. မန်ဘာများသည် တစ်ခြားမန်ဘာများအား ခြိမ်းခြောက်ခြင်း (လုံးဝ) မပြုရ။ အကောင့်ဟက်ရန်ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ personal info များအား ဖွရန်ခြိမ်းခြောက်ခြင်းများလည်း ဤစည်းကမ်းထဲတွင်အကျူံးဝင်ပါသည်။
၃. ပို.စ်များတွင် စာပြန်ရာတွင် တိုတောင်းသောစာလုံးများ အသုံးမပြုရ
၄. မန်ဘာများအား Trojan, viruses, backdoors, adware, rootkit စသော software များနှင့်ကူးစက်အောင်မပြုလုပ်ရ။
၅. ပိုစ့်မတင်ခင် အရင်ဆုံး ဖိုရမ်ထဲတွင် သင်တင်မည့်အကြောင်းအရာ တင်ထားခြင်းရှိမရှိကို အရင်စိစစ်ပါ။
၆. ပိုစ့်များတွင် အခြားသူများအား ဆဲရေးတိုင်းထွာခြင်း၊ ရှုံ့ချခြင်း၊ စိန်ခေါ်ခြင်း၊ များမပြုလုပ်ရ။ ပြုလုပ်လျှင် ပြုလုပ်သူအား Admin team မှ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ban ထားခြင်းဖြစ်စေ ဆိုးဝါးလျှင်အတိုင်းအတာမဲ့ ban မည်ဖြစ်ပါသည်။
Forums in ' Rules , Announcements and News'
This is the weekly MSF news thread forum. Find out about what's happening on MSF this week.
Rules , Announcements and News